चौथो अंगमा श्रीरामसिंह बस्नेत : नेताको खल्तीबाट नियुक्ति पाएकाहरुबाट सही सूचनाको के आश? Ukeraa – Latest and featured news from Nepal.
संसारभर नै सरकारले आम-सञ्चार सञ्चालन गर्नुपर्छ कि पर्दैन भन्ने विषयमा प्रश्न र टीकाप्पिणी भइरहेका छन्। एकतन्त्रीय शासन व्यवस्था भएका मुलुकलाई छाडेर भारत र पाकिस्तानमा सरकारी स्तरबाट रेडियो र टिभी सञ्चालनमा छन्।
राज्यबाट सञ्चालित मिडियाहरु कसरी सञ्चालन गर्ने भन्ने स्पष्ट नीति हुनुपर्छ। तर कुनै पनि राजनीतिक दलको स्पष्ट नीति देखिँदैन। आफ्नालाई नियुक्ति र आश्रय दिने थलो भएका छन्, हाम्रा सञ्चार माध्यम। सुरुदेखि नै सरकारमा बस्नेहरुको धेरै कमी-कमजोरी देखियो।
सरकारप्रति उत्तरदायी की जनताप्रति?
रासस, रेडियो नेपाल, गोरखापत्र, नेपाल टेलिभिजन लागायतका राज्यबाट सञ्चालित मिडियाको दायित्व के हो? यस्ता सञ्चार माध्यममा नियुक्ति हुने व्यक्ति नियुक्ति दिनेप्रति मात्र बफादार हुनु र अन्य कतै पनि मतलब नराख्नु हो? यहाँ भएको यही छ। आफूलाई नियुक्ति दिनेप्रति नरम र अन्य विषयमा कुनै खालको मतलब गरेको देखिँदैन।
जनताको करबाट सञ्चालित मिडियाहरु जनताप्रति बफादार हुनुपर्नेमा राजनीतिक दलको पनि गुटप्रति बफादार भएको देखिन्छ। छापिने, प्रसारण हुने विचार र समाचार हेर्दा गुटपरस्त नै देखिन्छ। मन्त्रीहरु फेरिरहन्छन्, सरकारप्रति बफादार हुने मालिक रिझाउन भजन गाउन आवश्यक छैन। सञ्चारमाध्यम सतप्रतिशत जनताप्रति उत्तरदायी हुने, ऐन-कानुन अन्तर्गत रहेर जनताप्रति बफादार रहने हो।
सरकारलाई निगरानी गर्ने की सरकारले निगरानी गर्ने?
एउटा पत्रिका त यतिसम्म बायस भयो की, त्यसको उदाहरण मेलम्चीको पानी उद्घाटन गर्दाको समाचार स्पेस हेरे पुग्छ। केही समयअघि राष्ट्रपतिले मेलम्ची खानेपानीको उद्घाटन गर्नुभयो। झन्डै आधा करोड जनसंख्याको चासोको विषय हो यो। तर त्यो निजी पत्रिकाले यो समाचारलाई प्रमुखताका साथ छापेन, बायस भयो। आधा करोड जनसंख्यालाई बेवास्ता गर्नु कसरी व्यावसायिक पत्रकारिता भयो? यो हदसम्मको बायसले पत्रकारिताको धर्म पूरा हुँदैन।
राजनीतिक दलले सुधार गर्ने त कता हो कता झन् पार्टीको भ्रातृ संगठन खोलेर राखिदिएको छ। भ्रातृ संगठनहरु खोलेर राखिदिएपछि कसरी प्रोफेसनालिजम हुन्छ? सञ्चार माध्यममा नै चरम राजनीतिकरण भएपछि पत्रकारिताको धर्म आउँदैन। दलीयकरणले बिग्रेका छन् हाम्रा मिडियाहरु। पत्रकारको पनि कमीकजोरी नै छैन म भन्दिनँ तर हदै दलीयकरणले र सरकारको मन पर्ने मात्रै छाप्नाले पञ्चायत र अहिले कुनै फरक आएको देखिँदैन।
जनतामा त सरकारप्रति आक्रोश हुन्छ। सरकारप्रतिको आक्रोश छाप्न, प्रसारण गर्न मान्दैनन् मिडियाहरु। खोजमुलक समाचारको लागि बजेटको पनि आवश्यकता पर्छ। नयाँनयाँ गाडीमा खर्च गर्ने रकम समाचारमा लगानी गर्दैनन्। हाकिमहरुलाई नै वास्ता नभएपछि रिपोर्टरलाई मात्र केको टाउको दुखाइ?
म राससमा छँदा खोजमुलक समाचार ल्याउने कोशिस पनि गरिएको हो। रिपोर्टरले ल्याएका पनि थिए तर चिफ रिपोर्टर र सम्पादकलाई वास्ता नभएपछि रिपोर्टरलाई मात्र दोष दिएर हुँदैन। यसो भन्दैगर्दा रिपोर्टरका कमजोरी नै छैन भनेको हैन। तर रिपोर्टरलाई प्रोत्साहन गर्ने, गाइडलाइन दिने त गर्नुपर्‍यो नि! यो गरेको देखिँदैन।
समस्या छन्, सामाधान के त?
समस्याको मुल जरो भनेको रासस र गोरखापत्र २०१९ र २०२० को ऐन अनुसार चलेका छन्। त्यो त पञ्चायतको बेला थियो। अहिले गणतन्त्रसम्म आउँदा पनि यही अनुसार चल्ने? यो ऐनमा नै समस्या छ, अब यो पुरानो ऐनले चल्न सक्दैनन् गोरखापत्र र रासस। यो ऐन खारेज गरेर समयसापेक्ष ऐन बनाउनुपर्छ।
अब पनि आफूले भनेअनुसार लेख्न, भजन गाउन सिकाउने गरी तालिम दिने हुन् कि! त्यो हेर्न भने बाँकी छ। गर्भमैं राजनीति घुसेकाले शंका भने छँदैछ।
(गोरखापत्र तथा राष्ट्रिय समाचार समितिमा लामो समय काम गरेका बस्नेतसँग उकेराको चाँथो अंग कोलमका लागि प्रजु पन्तले गरेको कुराकानीमा आधारित।)